ဆိုးသွမ်း: ကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့သော( ၃ )
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:35 AM
ရေးသာရေ ဘယ်နှခန်း ဆက်ဆက် လာဖတ်မယ် :P
ဂုတ်ထပ်ကျော်လို့ လားရှိုးတောင် ရောက်လာမှ ကို
လာမယ် . ရှမ်းမလေးတွေ လှကြောင်း ချောကြောင်း
အကိုကြီးရေ ဇာတ်ရှိန်ကတော့ မြင့်ပီးရင်းမြင့်ပဲ ရထားခရီးကိုတောင် စိတ်ဝင်စားအောင် ရေးဖွဲ့နိုင်တယ်ဗျာ နောက်ဆက်တွဲတွေ မြန်မြန်လေးလုပ်ပါဗျို့ ပျော်ရွှင်ပါစခင်ဗျာ :)
အပိုင်း (4) မျှော်နေသည်။
Kuthkai ko bus ne daw twar bu tal. i was amazed by the the scenery. Yeah State is suchabeautiful state. Oh my beloved country... HOW BEAUTIFUL YOU ARE.... MI` TAL BYARR MYAN MYAN SET BYO...
လာရှိုးသူလေးတွေ လှတဲ့အကြောင်းတော့ ထည့်ရေးပေးလိုက်ပါ
နယ်သားရယ်။ မလှဘူးဆိုရင် ငိုနေအုံးမယ်။ မင်းအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်
Set par dot byo.., Ket myan myan lay naw.
ကွတ်ခိုင်သူ တွေအကြောင်း ပါအောင်ရေး ကိုယ့်လူ။ ဖွလိုက်မယ်နော်။ :D
အရေးအသားကတော့ တစ်လျှောက်လုံးကို ဆွဲလာတော့တာပဲ ဂုတ်ထိပ် တံတား အကြောင်း